That's so good, right?: လိင်တံ အရွယ်အစား (Penis Size)
အမျိုးသားတွေ အထူးသဖြင့် အရွယ်ရောက်ပြီး အမျိုးသားများဟာ မိမိတို့ရဲ့မွေးရာပါ လိင်အင်္ဂါအရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီး စိတ်ဓာတ်ရေး ရာပိုင်းဆိုင်ရာ အချို့နေရာများမှာ ဂုဏ်ယူတတ်ကျသလို အားငယ်တတ်ကြပြန်တယ်လို့ ကျွန်တော်လေ့လာစူးစမ်းမိသလောက် ပြောချင် ပါတယ်။
လူရယ်လို့ဖြစ်လာကြရင် အရွယ်ရောက်လို့ အိမ်ထောင်သားမွေးကိစ္စတွေပြောဖြစ်ကြတဲ့အခါ အမျိုးသားအများစုဟာ မိမိတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါ အရွယ်အစား (Size) ကို မိမိတို့ရဲ့လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ပမာဏနှင့် တိုက်ရိုက်ပက်သက်သယောင် ထင်မြင်ယူဆပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ အမှန် တကယ်တော့ တိုက်ရိုက်အချိုးမကျဘူးလို့ ဆိုပါရစေ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လိင်တံအရွယ်အစား(Size)ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ မိဘတွေက အမွေပေးတဲ့ ဆက်ခံရရှိတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ ဆိုင်ရာ ထူးခြားသည့် လက္ခဏာသွင်ပြင်လို့ ခေါ်ဆိုရမည့်အချက်များပေါ် မူတည်ဆုံးဖြတ် ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လိင်တံ အရွယ်အစားအား တိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် လျော့စေခြင်းဆိုသည်များကို လုံးဝပြုလုပ်လို့ မရပါခင်ဗျာ။ ယောက်ျားကလေး အရွယ်မှ ယောက်ျားကြီးဆိုတဲ့ အရွယ်ရောက်ခြင်းဖြစ်စဉ်မှာ ကျွန်တော်တို့ လိင်တံအရွယ်အစားပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးအများ စုဟာ အသက် ၁၀နှစ်မှ ၁၄နှစ်အတွင်း အရွယ်ရောက်ခြင်း စတင်တတ်ပါရဲ့။ အချို့တွေကတော့ ဒီအသက်အရွယ်ထက်စောနိုင်သလို နောက်ကျပြီးတော့လည်း စတင်တတ်တာပေါ့လေ။ ပထမဆုံး လိင်ဥ (balls) တွေက စတင်ကြီးထွားလာတယ် ပြီးတော့ အဲဒီ့ဟာရဲ့ အနီးဝန်းကျင်တ၀ိုက်မှာ အမွှေးအမျှင်လေးတွေ စပေါက်တာဗျ။ လိင်တံအရွယ်အစားလည်း စကြီးလာပြီပေါ့။ ပထမတော့ အရှည်၊ နောက်ပြီးတော့ အတုတ်။ လိင်ဥတွေ စတင်ကြီးထွားလာပြီးနောက် လေးနှစ်မှ ခြောက်နှစ်အတွင်း နောက်ဆုံးလိင်တံအရွယ်အစားကို ရောက်ပါတယ်။ ဒီအချိန်တွေမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် ကွဲပြားခြားနားသွားတတ်တာပါ။
ဒီသာမန် လိင်တံကြီးထွားခြင်းဖြစ်စဉ်ကပဲ အမျိုးသားအများအပြားသို့ အနှောင့်အယှက်သဘောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လိင်ဥတွေ ဦးဆုံးကြီး ထွားလာစဉ်ကတည်းက (ပြီးတော့ လိင်တံအရွယ်အစားကြီးထွားခြင်းကနောက်ကလိုက်လာတာ) ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များစွာဟာ လိင်ဥအရွယ်အစားကြီးထွားလာနေခြင်းကို သတိမထားဘဲ ၊ ဘာအပြောင်းအလဲမှ မဖြစ်ဘူး သူတို့လိင်တံအရွယ်အစားက သေးလွန်း တယ်လို့ စိုးရိမ်နေတတ်ကြပါတယ်။ အကယ်၍ စာဖတ်သူတို့ဟာ overweight ဖြစ်နေသူများဆိုရင် အဆီ tissue တွေဟာ လိင်တံ အရွယ်အစားအစစ်အမှန် ရှိတာထက်သေးတဲ့ဟန်မျိုးဖြစ်ပေါ်နေစေပါရော။ အတန်းထဲ သူငယ်ချင်းအမျိုးသားတွေက ပုံမှန်အတိုင်း အရွယ် ရောက်မှု ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့် သူတို့လိင်တံအရွယ်အစားတွေဟာ လူကြီးလိင်တံတစ်ခုအသွင်အစစ်အဖြစ်မြင်ပြီး စာဖတ် သူတို့အဖို့မှာ အလွန့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မာတောင်မှုမဖြစ်ချိန်မှာ ကြည့်ခြင်းဖြင့် (သို့မဟုတ် ပျော့တွဲနေချိန်) မာတောင်နေတဲ့အဆင့်မှာ လိင်တံတစ်ချောင်းဘယ်လောက်ကြီးထွားလာမယ်ဆိုတာသိဖို့ ခက်ပါတယ်။
များပြားကွဲပြားလှသော လူတစ်ယောက်မှ တစ်ယောက်သို့ လိင်တံအရွယ်အစား (size) အစစ်အမှန်ဆိုတာ ဒါပါလို့ပြောဖို့ နည်းနည်း ခက်ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောလူများစွာဟာ ကွဲပြားခြားနားသော လိင်တံအရွယ်အစားရှိ နေနိုင်တာကိုး။ ကျွန်တော်တို့ဟာ လိင်တံ အရွယ်အစားကြီးများသူများဟာ လိင်တံအရွယ်အစားသေးသူများထက် ကောင်းမွန်တဲ့ လိင်မှုဘ၀ကိုရရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ ယုံတမ်းစကားကို လှုံ့ဆော်တဲ့ လူမှုအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုမှာ နေထိုင်ကြပါတယ်။ လိင်မှုဟာသများ၊ တီဗီအစီအစဉ်များ၊ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ၊ ပြီးတော့ တစ်ခြားနေရာ များမှာလည်း အစဉ်တစိုက်ကိုကြားရပါတယ် အဲဒီ့စကားကို။ အမှန်တကယ်တော့ သာမန်လိင်တံအရွယ်အစားကြီးမားသူများဟာ သူတို့ လိင်ကိစ္စမှာ သူတို့တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ အရပ်အမြင့်ပြောင်းလဲတာပြီးဆုံးသွားချိန် တစ်နှစ် သို့မဟုတ် နှစ်နှစ် စောင့်ကြည့်ရပါမယ် နောက်ဆုံး လိင်တံအရွယ်အစားဘာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ။ ကျွန်တော်တို့ ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်အတော အတွင်း လိင်တံအရွယ်အစားက ပုံမှန်မဟုတ်ဟု စိုးရိမ်မိပါက မိသားစုဆရာဝန် သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်ဆီသွား သူ သို့မဟုတ် သူမကို အဲဒီ့အကြောင်း တိုက်ရိုက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကိစ္စတိုင်းရဲ့ အများစုမှာ စာဖတ်သူတို့ အားလုံးအဆင်ပြေကောင်းမွန်ပါသည် လို့ပြောခဲ့ကြမှာ အသေအချာပါ ။
ပျှမ်းမျှ လိင်တံအရွယ်အစား (Average penis size)
- ပျှမ်းမျှလိင်တံအရွယ်အစားသည် ၅လက်မ မှ ၇လက်မ ရှည်နိုင်ပါတယ် မာတောင်နေချိန်မှာ။ (ကွမ်းသီးခေါင်း၊ လိင်တံခေါင်းမှ ဆီးစပ် အထိတိုင်းတာခြင်း)
- လိင်တံတစ်ခု၏ ပျှမ်းမျှအ၀န်းအ၀ိုင်းက ၅လက်မနီးပါး သို့မဟုတ် ၁၂၇ မီလီမီတာ (127 to 178 mm) ၀န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
- ဟိုးလေးတကျော်သတင်းစကားတွေ မဟုတ်တမ်းတရားတွေကို မယုံကြည်ပါနှင့်။
ဒီစကြာဝဠာထဲက ဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှာ ကြားဖူးမယ်မထင်ပါဘူး ဘယ်လူမျိုး နှင့် မျိုးနွယ်စုကတော့ ဒီလိင်တံအရွယ်အစား ရှိရမယ် ရှိကြတယ်ဆိုတဲ့ ယေဘုယျ ထုတ်ဖော်ပြကြားချက် ရှင်းလင်းမှုတွေကို။ မည်သို့ဆိုစေ အချို့ကိစ္စတွေမှာတော့ လူတွေရဲ့ ဖော်ပြ ချက် ကောက်ချက်ချမှု ဆိုတဲ့ ပုံသေမူသေမျှသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ မျိုးနွယ်စုအုပ်စုအားလုံးမှာရှိတဲ့ အမျိုးသားများကတော့ အဲဒီကောက် ချက်ချပြောဆိုမှုတွေကိုအပေါ် ငြင်းဆန်ကြမှာတော့ သေချာပါတယ်။ လိင်ကိစ္စပတ်သက်မှုတစ်ခုရဲ့ အဖြေ သို့မဟုတ် ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှု ရရှိလိုက်ခြင်းက လိင်တံအရွယ်အစားကြီးမားခြင်းက လိင်မှုဘ၀ကိုပိုမိုပြည့်စုံစေတယ်ဆိုတဲ့စကားအပေါ် သံသယ၀င်မိကြပါလိမ့်မယ်။ အခြားစကားလုံးအနေနဲ့ပြောရရင်တော့.... Don't judgeabook by its cover!
လိင်တံအရွယ်အစား အစစ်အမှန်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း (Judging true penis size)
ကျွန်တော်တို့အနေနှင့် လိင်တံဆိုဒ်အမှန်ကို အဲဒီလိင်တံ ပျော့တွဲနေချိန် သို့မဟုတ် မာတောင်မှုမဖြစ်နေချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ အမျိုးသားအများစုဟာ ပျော့တွဲနေချိန်မှာ သေးငယ်နေပေမယ့် မာတောင်လာချိန်မှာတော့ ကြီးထွားတဲ့ဆိုဒ်တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲလာနိုင်တာပါ။
တစ်ချို့တွေကတော့ ပျော့တွဲနေချိန်ကထက် နှစ်ဆလောက်ကြီးလာတတ်သလို တစ်ချို့တွေကတော့ အနည်းငယ်သာကြီးလာတတ်တာ နောက်ဆုံးရလာဒ်က အတူတူနီးပါးပါပဲလေ။
ကဲကဲ....မိမိမွေးရာပါပစ္စည်းအပေါ် သံသယ၀င်ပြီး အားငယ်စိတ်ဝင်မယ့်အစား မိမိရဲ့ လိင်မှုဘ၀ကို ပိုမိုသာယာအောင် တစ်ခြားနည်းတွေ ရှိသေးကြောင်း သတိမူကြည့်လိုက်ပါလို့နော်။
Alex aung (24 Sep 2010)
Posted by Alex Aung at 8:09 PM